EXO Chanyeol ဘရာဇီယာ ဝတ်သလား ? – Korea Celebrities Fans
Date: May 8, 2017Author: KOREA CELEBRITIES FANS 1 Comment
ဝိုး .. သင်ဟာ EXO ဖန်ဆိုရင်တော့ ဒီသတင်းအပြင် ဒီသတင်းတင်တဲ့ Media ကိုပါ မုန်းမိပါလိမ့်မယ် ။ မကြာသေးမီက EXO Chanyeol ရဲ့ ဘရာဇီယာဝတ်ထားတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ပုံတစ်ပုံတက်လာပါတယ် ။
Bra ဝတ်ထားတယ်လို့ထင်ရတဲ့ Chanyeol ရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဘရာဇီယာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး ။ V shaped အတွင်းခံအကျီင်္ဝတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ အပေါ်အကျီ ပါးနေတာကြောင့် အတွင်ခံကို မြင်ရတဲ့ အချိန်မှာ ဘရာဇီယာ ပုံစံဖြစ်သွားရတာဖြစ်ပါတယ် ။
Previous Previous post: အဖွဲ့ဝင်အသစ်ဝင်လာပြီးမှ ပိုလူသိများလာတဲ့ Kpop Girl Band များ
Next Next post: လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ကတိကို တည်ခဲ့တဲ့ IU
One thought on “EXO Chanyeol ဘရာဇီယာ ဝတ်သလား ? ”